Dhukkuba Garaachaa Fayyuun Ni Danda’amaa?
Dilbata, Guraandhalaa 07, 2016 Local time: 06:40
Namoonni baayyeen dhukkubi garaachaa akka isaan rakkisu dubbatu. Qoma na guba, yeroon waa nyaadhu na rakkisa kaan immoo yoon waa hin nyaatiin ture natti hammaata jedhu.
Dr. Dhufeeraa Mokonnen Finfinnee irraa akka ibsanitti, qorannaan saayinsii akka agarsisuutti ittiin ka’umsi dhukkuba garaachaa baakteriyaa eech-paayloorii jedhamutu fi dawaa dhibee adda addaaf fudhataman keessa hanga tokko ta’uu ibsan.
Nyaati dhukkuba kana namatti kaasan jiraatan iyyuu sadarkaa hamaa irraan hin geesisan, jedhu. Dhugaatii Alkolii fi Tamboo xuxuun dhukkuba kana irraa fayyuu dadhabuuf sababaa biraa ti, jedhu Dr. Dhufeeraan.
Gabaasaa Guutuu MP3 tuquun dhaggefadhu